ဗီတာမင်စီက အရေပြားကို ဘာလို့ ဝင်းပစေတာလဲ - Hello Sayarwon
ဗီတာမင်စီသည် သင့်ကျန်းမာရေးသာမက သင့်အရေပြားအတွက်အဓိကလိုအပ်သောအာဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗီတာမင်စီ ထုတ်ကုန်မျိုးစုံရှိလာပြီး သင်အရေပြားကာကွယ်ရန် ပြန်လည်နုပျိုရန် နှင့်အရေးကြီးဆုံး အရေပြားကိုဖြူလာစေနိုင်သည်။ ဒါက တကယ်ပဲလား။ ဗီတာမင်စီက ဘယ်လိုအရေပြားကိုတောက်ပစေသလဲ။
ပထမဆုံးအရာက ဗီတာမင်စီဆိုတာဘာလဲသိရန်လိုအပ်သည်။ ဗီတာမင်စီကိုအက်ကိုးဗစ်အက်စစ်ဟုလည်းခေါ်ပြီး ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အရိုး အရွတ် ကြွက်သား နှင့်သွေးကြောများတွင်လိုအပ်သော ကောလန်းဂျင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုပြင် ဗီတာမင်စီသည် ဓါတ်တိုးပစ္စည်းဆန့်ကျင်နိုင်သောအရာအဖြစ်လဲသတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင့်အရေပြားကိုဖျက်ဆီးသော အသက်ကြီးလာစေသော ရေဒီကယ်အလွတ်များကိုဓါတ်ပြယ်စေသည်။ လူတို့သည် ဗီတာမင်စီကိုကိုယ့်ဟာကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ ထို့ကြောင့်အစားအသောက်မှ အကူအညီယူရသည်။ ဗီတာမင်စီကို အသီးအရွတ်များစားခြင်း အဓိကအားဖြင့် စစ်တရက်အသီးများ ဥပမာ သံပရာသီးလိမ္မော်သီးများမှရသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် သင့်ခန္ဓါကိုယ်မှလိုအပ်ချက်ကို ဆေးခဲ သို့မဟုတ် အရည်ဖြည့်စွက်ချက်များမှရသည်။
သင့်အရေပြားအရောင်ကို မယ်လနင်ဟုခေါ်သောဆိုးဆေး -မယ်လနိုစိုက်များဖြင့်လုပ်ထားသော- အရေပြားအတွင်းတွင်ရှိသော အရာများဖြင့်လုပ်ထားသည်။ မယ်လနိုစိုက်သည် အမိုင်နိုအက်စ် တိုင်ရိုစင်းကို အင်ဇိုင်းတိုင်ရိုစိုင်းနေ့ သုံး၍ မယ်လနင်သို့ပြောင်းစေသည်။ သင့်အရေပြားမှမယ်လနင်များများထွက်လေလေ အရေပြားမဲလေလေဖြစ်သည်။
ထိုအချက်ပေါ်မူတည်၍ အရေပြားဖြူစေသောအရာများသည် မယ်လနင်ထုတ်ခြင်းကိုနည်းစေသည်။ ဗီတာမင်စီပုံစံဖြစ်ပါက သင့်အရေပြားဖြူစေသောနည်းများစွာရှိသည်။ ဗီတာမင်စီသည် အင်ဇိုင်းတိုင်ရိုစိုင်းနေ့ ကိုကာကွယ်သည်။ အင်ဇိုင်းနည်းနည်းပဲသုံးလေလေ မယ်လနင်နည်းလေလေဖြစ်သည်။
ထိုပြင် ဓါတ်ထိုးပစ္စည်းဆန့်ကျင်သောအရာအဖြစ်ဗီတာမင်စီကလုပ်ပေးပြီး သင်အရေပြားအသက်ကြီးခြင်းမဲခြင်းဖြစ်စေသော ရေဒီကယ်အလွတ်ကိုတိုက်ပေးသည်။ ထိုပြင် ဗီတာမင်စီသည် ဂလူတာတိုင်အုန်း နှင့် ဗိတာမင်အီးကိုများစေသည်။ ထိုအရာနှစ်ခုသည် ပြင်းသောဓါတုဓါတ်တိုးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဂလူတာတိုင်အုန်းသည် အရေပြားမှပိုမဲသော အူမယ်လနင်အစား ဖီအိုမယ်လနင်ကိုထုတ်စေသည်။ ထိုကြောင့်သင့်အရေပြားကိုပိုတောက်ပစေသည်။
အခြားတောက်ပစေသောနည်းမှာ အရည်ပြားကွာစေသောအပျော့ဆေးအဖြစ်လုပ်ပေးဖြင့် သေသောအရေပြားဆဲလ်များကိုဖယ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုကြောင့ သင့်အရေပြားပိုချောမွေ့ပြီး တောက်ပစေသည်။
အရေပြားနီခြင်ယောင်ခြင်းခံစားစေရပါက ဗီတာမင်စီကိုသုံးနိုင်သည်။ ဗီတာမင်စီသည် အရေပြားပြသာနာများကိုထိရောက်စွာကူညီနိုင်ပြီး ပိုတောက်ပပြီး ပိုညီသောအသားကိုဖြစ်စေသည်။
ထိုပြင် ဗီတာမင်စီက နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းကိုပိုကာကွယ်နိုင်ပြီး အရေပြားကိုဖြူစေသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ယောကျာ်းလေးမိန်းကလေးအယောက်၂၀ကို ဗီတာမင် စီ (၂၀၀၀မီလီဂရမ်)နှင့် သဘာဝဗီတာမင် အီး(၁၀၀၀ အိုင်အီး)ပေးပါက နေရောင်ကြောင့်ပျက်စီးခြင်းကို ၈ရက်အတွင်း ၂၀ရာခိုင်နှုန်းထိသက်သာစေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အခြား အာနိသင်မရှိသောဆေးတွင် ယောင်ခြင်းပျက်စီးခြင်းကိုပိုဖြစ်စေပြိး နေရောင်ကြောင်ပျက်စီးခြင်းလဲပိုဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ဗီတာမင်စီသည် အရေပြားကိုတောက်ပစေပါသလား?ထိုအဖြေသည် လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်သည်။ ဗီတာမင်စီကို ဆေးပြား လိမ်းဆေး ဗီတာမင်စီပါသောအလုကုန်များသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ အရေပြားဖြူရန် ဗီတာမင်စီသုံးလိုပါက ဆရာဝန်နှင့်အရင်တိုင်ပင်ပါ။။
15 Ways To Lighten Skin With Vitamin C.http://www.onlyskinwhitening.com/15-ways-to-lighten-skin-with-vitamin-c/. Accessed August 6, 2016.
Does Vitamin C Lighten Skin Tone- How Much Vitamin C Should I Take to Lighten Skin?. http://www.skincareorg.com/skin-whitening/does-vitamin-c-lighten-skin-tone-how-much-vitamin-c-should-i-take-to-lighten-skin/. Accessed August 6, 2016.
Vitamin C Skin Lightening:7Facts You Need to Know. https://www.illuminatural6i.com/info/vitamin-c-skin-lightening/. Accessed August 6, 2016.
How taking extra Vitamin C lightens skin. http://whiterskin.info/how-taking-extra-vitamin-c-lightens-skin/. Accessed August 6, 2016.